फुटेको चुरा गीतले सांगीतिक बजारमा तहल्का मच्याउदै। | रेडियो झापा 100.7 MHz.
फुटेको चुरा गीतले सांगीतिक बजारमा तहल्का मच्याउदै।
रेडियो झापा 100.7 MHz. शनिबार, मंसिर २०, २०७७ ८:१३:०१
२० मंसिर,काठमाडौ । अहिले सर्वाधिक चर्चामा रहेकी अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठ र गायक प्रकाश सपुतको भिडियोले तहल्का नै मच्याई रहेको छ। टिकटकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म उनीहरुका भिडियो क्लिपले नै भरिएका छन् । यो गीतको भिडियो अत्यन्तै सफल भएको देखिन्छ । छोटो समयमा लोकदोहोरी गीत ‘फुटेका चुरा’को म्यूजिक भिडियो युट्युब ट्रेन्डिङको नं तीनमा उक्लेको छ । सोमबार साँझ सार्वजनिक उक्त गीतको ‘भ्यूज’ ५ लाख ५८ हजार नाघिसकेको छ ।